PERIKOPA FJKM ALAHADY 20 OKTOBRA 2013 | FJKM Amboniloha
PERIKOPA FJKM ALAHADY 20 OKTOBRA 2013
1 Atsipazo eny ambonin’ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela.
2 Samy omeo anjara ny fito, ary na dia ny valo aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana hanjo atỳ ambonin’ny tany.
3 Raha feno ranonorana ny rahona, dia halatsany amin’ny tany izany; ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny hazo, dia eo amin’izay ianjerany ihany no handriany.
5 Toy ny tsy ahafantaranao ny amin’ny alehan’ny rivotra, na ny amin’ny fitombon’ny taolana ao an-kibon’izay manan’anaka, dia toy izany no tsy ahafantaranao ny asan’Andriamanitra, Mpanao ny zavatra rehetra.
6 Amin’ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin’ny hariva dia aza atsahatra ny tananao; fa tsy fantatrao izay ho vanona, na ny teo aloha, na ny teo aoriana, na angamba samy ho vanona avokoa izy roa tonta.
8 fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin’ny androny rehetra izy ka hahatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny: izay rehetra ho avy dia zava-poana.
1 Ary tamin’izany andro izany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron’ny ranomasina.
3 Ary nilaza zavatra maro taminy tamin’ny fanoharana Izy ka nanao hoe: Indro, nivoaka ny mpamafy mba hamafy;
5 Ary ny sasany dia voafafy teny amin’ny tany marivo ambony vatolampy; dia nalaky nitrebona ireny, satria tsy nisy tany lalina.
7 Ary ny sasany dia voafafy teny amin’ny tsilo; ary ny tsilo naniry ka nangeja azy.
8 Ary ny sasany dia voafafy teny amin’ny tany tsara, dia namoa: ny sasany avy zato heny, ary ny sasany avy enim-polo heny, ary ny sasany avy telo-polo heny.